Gosa barbaachaa ifteessa.
Tarmii barbaachaa sanduuqa keessa galchi ykn tarreerraa fili. Barruu qarree jalaa duruma gara sanduuqa makaa Barruu garagalchame. Note that while running a search in a form, tabs and line breaks cannot be processed.
Qabiyyeen dirree qullaa
Dirreewwan deetaa barbaadamu qabdu ifteessa.
Qabiyyeen dirree qullaa miti
Dirreewwan barbaachaaf ifteessa.
Unkaa yaayaa iddoo barbaachaa qabsiisuf barbaannu ifteessa.
Galmeewwan unkaa unkaawwan yaayaa baay'ee qabaachuu danda'a. Kun qabiyyeewwan unkaa manyaa, kan tokkoonsaa gabatetti koronyate.
Sanduuqa makaa Unkaa maqaawwan unkaawwan yaaya mara qaban too'annoowwan kamtu argama.
Barbaachi dirreewwan mara qaxxaamura. Yoo kaka'iinsi barbaachaa gabatee keessa ta'e, dirreewwan gabatee keessaa marri ni barbaadama. Yoo kaka'iinsi barbaachaa unkaa keessa ta'e, dirreewwan unkaa yaayaa(Unkaajalatti galchame) marri ni barbaadamu. Yoo kaka'insi barbaachaa dirree too'annoo gabatee keessa ta'e, dirree gabatee kuusaa deetaa gatiinsaa sarjaawwan mara wajjiin koronyate barbaada.
Barbaanni dirree deetaa murtaa'aa keessa darba.
Barbaacha too'achuuf qindoomina ibsaa
Firummaa tarmii barbaachaa fi qabeentota dirree ifteessa. Filannoowwan asiin gadii ni mul'atu:
Dirree keessa eessatiyyuu
Dirreewan sarxaa barbaachaa dirree keessa eessatiyyuu qaban mara deebisa.
Dirreewan sarxaa barbaachaa jalqaba dirree keessa mara deebisa.
Dirreewan sarxaa barbaachaa xumura dirree keessa mara deebisa.
Dirreewan sarxaa barbaachaa akka qabeentota dirree walfakkatan mara deebisa.
Yoo sanduuqa makaaIbsama turbaa abbaalaa mallatteessite, dalagaan kun hin argamu.
Dhangii dirree fayyadami
Dhangiiwwan dirree marri kan hubannoo argatu weyta galmee ammee keessaa barbaadamte ifteessa. Dhangiiwwan dirree Field formats are all visible formats that are created using the following possibilities:
Amaloota dirree haalata wixinee gabatee keessaa,
Unkaawwan amaloonni too'annoo keessaa
"Gur" deebi'e, garuu "2" miti.
"2" deebi'a, garuu "Gur" miti
Dirree dhangessuu gargaaramuun barbaaduun yerooo hunda ni heeyyamama.
Dhimma kanarratti, dhangiiwwan baratamoo dhangiiwwan kuusaan keessaan kuufame agarsiisa. Inni yeroo hunda dhimmamatti hin mul'atu, keessattuu yoo gosoota deetaa fakkeessuf fayyadamte (fakkeenyaaf, dirreewwan yeroo kuusaalee deetaa dBASE keessatti). Kun kuusaa deetaa fayyadamterratti hundaa'a akkasumas gosa deetaa tokko tokkoo isaanii. Dhanga'iinsa dirreetiin barbaadun walgita yoo wanta dhugumaan mul'atuu qaban qofa barbaaduu barbaadde. Dirreewwan kun Gosa Guyyaa, Yeroo, Guyyaa/Yeroo fi Lakkoofsa/Cimdii.
Yoo gatii sanduuqota makaa, fi Dhangii fayyadama dirree barbaadaa jirru banaa ta'e, Sanduuqota makaa mallattaa'ef "1" fudhachuu dandeenya, "0" sanduuqota makaa hin mallattaa'iniif, fi diraa duwwaan sanduuqota makaa hinibsaminiif. Yoo barbaachi turame Dhangii Dirree Fayyadami dhaamaa tti qindaa'e, gatiiwwan durtii maxxanaa-afaanii "DHUGAA" ykn "SOBA" ilaaluu dandeenya.
Weyta sanduuqota makaa keessa barbaannu yoo Dhangii dirree fayyadi fayyadamne, barruu sanduuqota tarree keessatti barbaadde mul'isa. Yoo Dhangii dirree fayyadi, jedhu hin fayyadamne dhangii dirree baratamoo qabeentotaan wal gitan barbaadu dandeessa.
Yeroo barbaachaa qubee xiqqaa fi qubee guddaa xiyyeeffannaan akka itti kennamu ifteessa.
Adeemsa barbaachaa kallattii faallaatti ka'u ifteessa, kuusaa dhumaa gara jalqabaa.
Gubbaa irraa / Jala irraa
Barbaacha lamkaasi. Barbaacha fuulduraa kuusaa jalqabaa lamkaasi. Barbaachi ofduubaa kuusaa xumuraa lamkaasi.
Ibsama turbaa abbaalaa
Arfii walfakkaata tokko qofaaf
"?ilooppii" deebisa "Filooppii"
"M?ller" deebisa, fakkeenyaaf, Miller fi Moller
Arfii walfakkaata 0 ykn baay'eef
"*-*" deebisa "ZIP-Drive" and "CD-ROM"
"M*er" galfatawwan mara "M" jalqaban fi "er" xumuraman deebisa (fakkeenyaaf, Miller, Moller, Mather)
Barbaachi himannoo baratamaan, barbaacha turbaa abbaalaa caalaa filannoo namaaf kenna. Yoo himannoo baratamaa waliin barbaadu, kanneen arfiilee armaan gadii baarbaacha turbaa abbaalaa waliin walgitu:
Ibsama turbaa abbaalaan barbadi
Ibsamoota idileen barbaadi
Yabbina arfiitiin walsima(afaanotani Eshiyaa qofa yoo danda'an)
Sagaloota akka(Jappan) (afaanota Eshiiyaa qofa yoo danda'an)
Meedirqaala barbaachaa yaadannoo walfakkaataa barruu Jappaan keessatti fayyadu yogguu ifteessi. Sanduuqa yaadannoo kana fili, ittiaansuudhaan dirqaalawwan barbaachaa ifteessuuf ...qabduu cuqaasi.
Dirqaalawwan barbaachaa yaadannoo walfakkaataadhaaf barruu Jappaan keessaa fayyadame qindeessa.
Akka walqixaatti lakkaa'a
Yoo barbaachi milkaa'inaan xumurame, dirree walgite gabatee keessatti shoolame. Deebi'anii qabduu Barbaachaa cuqaasun barbaacha ittifufuu dandeessa. Adeemsa barbaachaa dhiisuf qabduu Dhiisijedhu cuqaasuu dandeessa.
Qaaqa cufa. Qindoominni barbaacha xumuraa hanga LibreOfficedhiisi jettutti olkaa'ama.
Yoo gabateewwan ykn unkaawwan baay'en baname, filannoowwan barbaacha gara garaa galmee tokkoof qindeessu dandeessa. Weyta galmeewwan cufne filannoowwan barbaachaa galmee dhumarratti cufame qofatu olkaa'ama.
Title is: Kuusaa Barbaadi